Igumbi elinomtsalane elunxwemeni elineembono ezintle - I-Airbnb
Igumbi elinomtsalane elunxwemeni elineembono ezintle
Indlu ebanzi kunye neyokuzimela kwikhaya leeholide elinokuhlala abantu aba-5. Ijikelezwe yimithi yompayina ekhulileyo kunye nemithi yomnquma kunye nembono entle yoLwandle lweAegean, inika indawo efanelekileyo yokurhoxa kubuphithikethi bobomi bemihla ngemihla.
Kwimizuzu nje embalwa, unokuba uthi nkxu iinyawo zakho kumanzi acwengileyo okanye ubethe enye yeendlela ezininzi zokuhamba kwizidiliya ezikhanyiswe lilanga kunye neenduli ezinyukayo.
Ipropathi ifumaneka ngaphandle kwelali yase-Ouranoupoli kunye ne-500 m kude nomda wokuwela iNtaba i-Athos. Ziiyure ezimbini ukusuka kwisixeko saseThessaloniki.
Yakhelwe ekupheleni kweminyaka engama-90, uyilo lwayo kunye nezixhobo zinceda ukunciphisa impembelelo yokusingqongileyo. Le ndlu iqulethwe kumanqanaba amabini asezantsi, aphantsi komhlaba. Oku kunceda ukugcina indlu ipholile ehlotyeni ngelixa ivumela ukukhanya kwendalo okuninzi. Ipavilion yamaplanga egadini ibonelela ngemibono yeziqithi ezincinci ezingaphaya kwe-bay, indawo engasemva egqibeleleyo yokutyela i-al fresco.
Iindwendwe zinokuphumla kwindawo ezolileyo, zidada kunye ne-snorkel kumanzi ekristale, ndwendwela ezinye zeendawo zakudala ezikufuphi, zithathe uhambo olufutshane ngesikhephe ukuya kwisiqithi sase-Ammouliani okanye zitsibe ngenqanawa iiyure ezi-2 ukuya kwiNtaba iAthos (jonga i-Athos). amahlengesi!). Ilali yase-Ouranoupoli ibonelela ngokhetho lweekhefi, imivalo kunye neendawo zokutyela ezinemveliso yasekhaya kunye nokutya okutsha kolwandle kwimenyu.
Inombolo yomthetho: 00000449532